पुटिनका कट्टर आलोचक नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार ! « MNTVONLINE.COM
पुटिनका कट्टर आलोचक नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार !
बर्लिन । रसियाका विपक्षी नेता एवं रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक अलेक्सी नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ । जर्मनीको च्यारिटी अस्पतालका चिकित्सकहरुका अनुसार नाभाल्नीलाई दिइएको कृत्रिम स्वासयन्त्र हटाइएको र उहाँ अस्पतालको शैयाबाट उठेर सामान्य हिँडडुल गर्न थाल्नु भएको छ ।
च्यारिटी अस्पतालले भनेको छ, “नाभाल्नीलाई स्वास फेर्नका लागि राखिएको मेकानिकल भेन्टिलेटर हटाइएको छ । छोटो अवधिका लागि उनी अस्पतालको शैयाबाट यताउता हिँडडुल गर्न सक्ने हुनु भएको छ ।”
रसियाका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले मस्को विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरु घोषणा गर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट नाभाल्नीको मुद्दालाई पश्चिमा मुलुकहरुले अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । उनले ओम्स्कबाट मस्को फर्कनेक्रममा बिमानमै अचेत भएका नाभाल्नीलाई बचाउन बिमानका पाइलटले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताए ।
उनले चिकित्सकहरुले तत्काल उपयुक्त सेवा दिन नसकेको भए नाभाल्नीको जीवन जोखिममा पर्ने थियो भने । उनले भने, “पाइलट, एम्बुलेन्सका सदस्य र चिकित्सकहरुको तत्काल प्रतिक्रिया निकै सराहनीय छ । रुसी अनुसन्धानकर्ताहरुले पनि घटनामा भरपर्दो र विश्वासिलो नतिजा ल्याउने छन् ।”
इमेल : [email protected]ine.com